Umnqophiso kunye noMbono-Holley Technology Ltd.
Umbono weHolley kukuba ube ngomnye wabakhokelayo kwihlabathiulawulo amandla smartababoneleli besisombululo.
UHolley uza kuphuhlisa ngakumbi ngaphakathi kondoqo woshishino lwakhe, omeleze ubuchule obungundoqo, aphucule umgangatho wenkampani ngaphakathi kushishino kwaye izise imbuyekezo eyanelisayo kutyalo-mali kubanini bayo.
Ngokuqhubekayo ukubonelela ngeemveliso ezanelisayo kunye nenkonzo kubathengi abakhoyo, uHolley ugxininise ekuphuhliseni abathengi abatsha beqhinga lehlabathi kunye namaqabane kunye nokubonelela ngenkxaso eyaneleyo yezibonelelo.Singathanda ukuseka ubudlelwane bentsebenziswano bexesha elide kunye nomthengi oxatyisiweyo ngenkonzo enomdla kunye neemveliso ezithembekileyo.
Siyahlawulaingqalelokwiimfuno kunye neenkxalabo zethuabathengi.
Ngaphantsi kwe-IOT kunye ne-smart grid yoyilo lwetekhnoloji, iHolley ibonelela umthengi ngezisombululo kunye nezixhobo zokubandakanyeka ngokusebenzayo kulawulo olusebenzayo lwamandla kunye nokukhuthaza umsebenzisi wemithombo yamandla okuhlaziya.Kwimarike yemitha yemveli, siqhubeka sibonelela ngeemveliso ezithembekileyo kwicandelo.
Sixhaswe kwaye saphunyezwa iSivumelwano seZizwe eziManyeneyo esisayinwe liQela leHolley, siqalisa kwaye sisebenzisana neqabane lethu kunye nababoneleli, kwaye sibe ngabalingane boshishino lwehlabathi kunye.